Baana oo ka tagay shaqadii ECAIBC - CIYAARO.COM
Home / News / Somalia / Baana oo ka tagay shaqadii ECAIBC	Baana oo ka tagay shaqadii ECAIBC
By Gamadiid Guurre	Updated: October 27, 2015	Tweet
Bana Ali ayaa ka tagay isla markaana iska casilay shaqadii uu ka hayay xiriirka kubadda kuleyga ee magaalooyinka bariga bartamaha Africa, taasoo aheyd madaxa saxaafadda iyo suuq geynta. Bana ayaa waraaqdda is-casilaadiisa u diray gudoomiyaha xiriirka ECAIBC.
Bana waraaqdda is-casilaadiisa kuma uusan sheegin sababta keentay inuu xilkiisa iskaga tago kaasoo kaga ekaa bisha June ee sanadka 2016, marka laga reebo in go’aankaasi yahay mid mustaqbalkiisa u fiican.
Hoos ka eeg waraaqddii uu Bana u diray ECAIBC.
Related posts:Manchester City oo tijaabisay 5 wiil oo Soomaali ahDr Cali Cusmaan oo duqa Muqdisho ugu hambalyeey waxqabadkiisa dhanka Sports Horyaalka orodka oo Muqdisho ka furmey Share/Bookmark	BanaBasketballnew